The CNC qalab mashiinka network ganacsi cusub oo xoog leh ku biiro Anyka Era Internet tabaneeyo - Shiinaha Shandong New Ankai-Kitco
Labaatankii sano ee la soo dhaafay ee ganacsi, technology Internet ayaa qoraal heerka aan horay loo arag ee beddelo halyeeyada warshadaha iyo nolosha ganacsiga dunida ee. Iyadoo horumarinta deg deg ah ee Internet-ka maanta, "Internet daray" waxa uu noqday horumarinta caadiga ah ee cusub ee warshadaha wax soo saarka ah. Gobolka dhiiri hal-abuurnimo, u doodista "Internet daray", ayaa keenay fursado muhiim ah in ganacsiga wax soo saarka ah. Si aad ku guuleysan hindisaha xilligii Internetka, cusub Shandong Ankai CNC Machine Tool Co. Ltd. (halkan loogu yeeri sida "cusub Ankai CNC") si ay u doortaan xubin sare Shiinaha network ganacsiga mashiinka, iyo xoog ku Web Mall Intelligent, iyadoo rajada in network Chinese ganacsiga mashiinka suuqa internetka caawimo wanaagsan u furan dheeraad ah.
Kooxda Shandong Ankai CNC Machine Tool Co. Ltd. Shandong cusub Ankai hoos dhibic bilaabo sare, shirkadaha teknoolojiyad sare. Shirkadda group waa ganacsi weyn oo isku soo saarka si farsamaysan, gaari dhinta-loo shubay, warshadaha aluminium, warshadaha iyo biibiilaha, maaliyadda, hantida maguurtada ah iyo cuntada. Shirkadda Our waxaa ka go'an in jarida lathe CNC dawo design adag mashiinka iyo horumarinta, warshadaha iyo wax soo saarka. Shirkadda helay go'an buuxa ee shirkadda Technology South Korea HJM, dunmiiqa jira hal, saddex dhidibka gacanta ku xirid oo ka mid ah saddex CNC lathe toosan adag axdi qarameedka waxyaabaha taxane mashiinka universal, sidoo kale waxay leeyihiin mashiinka adag CNC lathe axdi qarameedka-fasalka sare dunmiiqa double, toddoba xirid dhidibka afar, inta ugu badan si loo daboolo baahida dadka isticmaala kala duwan. Badeecada gaar ahaan ku haboon processing ee u tiro badan, sax sare iyo qaybo ka mid adag in industry gaari, korontada, isgaarsiinta, warshadaha IT, caafimaad, ciidan, duulista, hardware, mashiinada iyo qalabka Haydarooliga yihiin.
Waqtigan xaadirka ah, horumarinta deg deg ah ee Internet-ka maanta, NC qalab mishiin cusub Shiinaha Ankai doorato in ay iskaashi la network ganacsiga doonayo inuu isticmaalo xoogga internetka, ballaariyo share suuqa. Doorashada Shiinaha CNC qalab mashiinka Ankai network ganacsiga cusub ee ku salaysan yahay website-ka berrinkii tixgelin qalab mashiinka xirfadeed iyo awood. Sanadkan waa sanadkii ugu horeeyay ee CNC qalab mashiinka Shiinaha Ankai iskaashiga iyo ganacsiga network cusub, sanad ka ah taageerada labada dhinac iyo horumarinta caadiga ah.
In mustaqbalka, iyo Deemaas Binna wadi doontaa in ay saf ugu jira line iyo sii wadaan in ay bixiyaan dadka isticmaala leh alaabta iyo adeegyada lagu qanci karo.